आखिर फोनमा किन र कसरी हेल्लो भन्ने चलन आयो ? | Matrisandesh
आखिर फोनमा किन र कसरी हेल्लो भन्ने चलन आयो ?
एजेन्सी । फोन उठाउने बित्तिकै पहिलो शव्द हुन्छ : हेल्लो । त्यसपछि मात्र फोन गर्ने मानिससँग बाँकी कुराकानी हुन्छ । आखिर फोनमा किन र कसरी हेल्लो भन्ने चलन आयो होला ? यो सबैको चासोको विषय हुन सक्दछ । यस विषयमा अनेक प्रकारका दाबीहरु छन् । तर त्यसमध्ये एउटा भरपर्दो तथ्य चाहिँ यस्तो छ ।
एशिया प्यासिफिक क्षेत्रीय सह-संयोजकमा कपिलदेव थापाले उम्मेदवारी दिने